फिचर Archives - Page 23 of 26 - Purbeli News
तिजमा फिलीपिनी महिला नाचिन र वृद्धालाई सम्मान
भाद्र १५, बुधबार / मोरङको हसन्दह–९ मा स्थापित रामजानकी मन्दिर परिसर तिज विशेष कार्यक्रम मनाईएको छ । कार्यक्रममा फिलीपिनी महिलाको पनि सहभागी थियो । माईत जान नपाएनि गाँउ घरका दिदी बहिनी सग तिजको गितमा छम्छमी नाचेर चित्त बुझाएकी फिलीपिनी महीलाले बताइन । उत्त कार्यक्रममा एक वृद्धालाई पनि सम्मान गरिएको छ । बुधबार हसन्दह गाविस वडा नं. ९ को आयोजनामा भए...
यी हुन् ‘वारी जमुना पारी जमुना…’ का गायक स्व. खेमराज गुरुङका ८ अधुरा सपना
काठमाडाैं / भनिन्छ, मानिसको जन्म र मृत्यु पूर्व निर्धारित नै हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ सबैमाझ चर्चित ‘वारी जमुना पारी जमुना...’ गायक खेमराज गुरुङ ४० वर्षको अल्पआयुमा नै यस धर्तीबाट विदा भए । गुरुङले पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ भएर देश विकास र स्थानीय सेवामा लाग्नेदेखि कृषि, पर्यटन र स्थानीयलाई रोजगारी दिनेसम्मका योजना बनाएका थिए । उनको अपुरो सपनाको डायरीम...
हङ्कङ “जोर्डन नाईट” ईन्दिरा, राजु र लाहुरेको धमाका
हङ्कङ / राजु लामा, आशिष राना (लाहुरे) र ईन्दिरा जोशीको धमाकेधार प्रस्तुतीमा हङ्कङेली दर्शकहरुले खुलेर मनोरञ्जन लिए । आईतबार विदाको दिन पारेर चिम सा चेई स्थित कम्युनिटी हलमा आयोजना गरिएको “जोर्डन नाईट २०१६” मा हरियो रङ्को ढाकाबाट निर्मित गाउँनमा सजिएकी ईन्दिराले बेली डान्ससँगै ‘बेहुली’, ‘सानु माया’, ‘उधे्रको चोली’ लगायत गित गाउँदा दर्शकहरुले पनि आ...
शाहरुख खानको छोरा र अमिताभ बच्चनकी नातिनीको सेक्स भिडियो सार्वजनिक
एजेन्सी । शाहरुख खानको छोरा आर्यन खान र अमिताभ बच्चनको नातीनि नभ्या नभेलीको भिडियो क्लिपले अहिले बलिउडमा तहल्का मच्चाईरहेको छ । यी दुवै जना अहिले लन्डनको एक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार यीनिहरुको सम्वन्ध धेरै नजिकिएको थियो । यी दुवै जना एउटा पार्टीमा सँगै भेटिँदा खिचिएको तस्विर ट्विटर मा अपलोड भएपछि करोडौं पटक र...
तिजकाे काेसेली स्वरूप चन्दाकाे ‘बाबाको आँगनमा छमछमी’ । (भिडियाे सहित)
सुनसरी, तिजको अवसर पारेर पुर्वकी सञ्चारकर्मी, साहित्यकर्मि तथा गायिका चन्दा खड्काले आफ्नो दोस्रोे सांगीतिक एल्बम माइती घर २ (भाग २) बजारमा ल्याएकी छिन्। आफ्नैं शब्द र लय संकलनमा तयार पारिएको यस एल्बममा २ वटा तीजका गीत समावेश गरिएको छ । २ वटै गित काठमाण्डौको मालाश्री स्टुडियोमा रेकर्ड गरीएको हो । दुबै गितको एरेन्ज बिनोद बाजुरालीले गरेका हुन । एउटा ...
जिरे खुर्सानीका भोक लाग्यो पनि लागे अमेरिका : अब नफर्किने
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कलाकारको मुख्य गन्तव्य अमेरिका बन्न पुगेको छ । चाहे नायक होस् या नायिका, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, गायक गायिका सबै कसरी हुन्छ अमेरिका भासिन चाहन्छन् । यही बीचमा जिरे खुर्सानी टेलिशृंखलाका हास्य कलाकार भोक लाग्यो (देवीराम पराजुली) पनि अमेरिका उडेका छन् । उनी गत १९ जुलाईमा अमेरिका लागेका हुन् । अमेरिका उड्नुअघि पराज...